Subhay News and views and events सुभाय अनलाईन न्युज: काठमाडौँ उपत्यकावासीले इन्टरनेट हडताल गर्ने
Subhay News and views and events सुभाय अनलाईन न्युज
काठमाडौँ उपत्यकावासीले इन्टरनेट हडताल गर्ने
एकदमै केन्द्रित विकास। हामी नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विकास पुगेको हेर्न चाहन्छौँ।
विकासको नाममा विनाश। विकासको सही परिभाषा लागु गर्न आवश्यक छ। निर्माणका कार्यबाट हुने सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको अनुसन्धान नगरी नै निर्माण हुँदैछ। हामीले विकासलाई निर्माणका कार्य सँग मात्र जोडेर हुँदैन, तर दिगो विकास र मानवतामा सकरात्मक प्रभाव सँग पनि हेर्नुपर्छ।
हाल भएकै बस्तीहरूमा धेरै समस्या छ। विकासका कार्यहरूमा यो प्राथमिकता हो, न कि थप बस्ती बढाउने। हालकै बस्तीहरूका व्यक्तिहरूको जीवन स्तर र आर्थिक उन्नतिमा सोच्नुपर्छ। बाटोका खाल्डा खुल्डी पुर्ने, पीच गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, पैदल यात्रु मात्र क्षेत्र देखि आवश्यकता र स्थानको प्रकृति अनुसार सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने। खानेपानी, स्वास्थ्य र रोजगारमा ध्यान दिने।
वातावरण र प्रकृति मावन जीवनका लागि अत्यावश्क छ, तर हामी सबैलाई उपत्यकाको प्रदुषण स्थिति बारे अवगतै छ। यहाँको हावा, पानी र माटो हानिकारक मात्र होइन विषजन्य पनि भैसक्यो। वातावरण संरक्षण र स्वस्थ हावा पानी हुनुपर्छ। यसमा उर्वरा भूमीको संरक्षण, हरियालीको स्थापना समावेश हुन्छ।
हामी सबैलाई उपत्यकाको उर्वरा भूमी शक्तिको बारे ज्ञान छ। यस्तो उर्वरा भूमी र अधिकांश कृषि पेशामा लागेका व्यक्ति भएको देशले अर्बौँ रूपियाँको खाद्यान्न आयात गर्छ। कुन भूमी खेतीको लागि हो कुन आवास क्षेत्रका लागि, कुन अस्पताल क्षेत्रका लागि आदि निश्चय गर्नुपर्छ। यो हाम्रो देशको खाद्यान्न साम्प्रभुत्व सँग सम्बन्धित छ। हाम्रो जमिनको सदुपयोग होस र “भू-उपयोग ऐन” बनाउन आवश्यक छ।
रियल स्टेट र भूमाफियाहरू द्वारा निर्मित अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको नयाँ बस्तीहरू माथि अब देखि रोक लगाइनु पर्छ, जसका कारण उपत्यका अस्तव्यस्त र स्प्रल हुँदै छ। यो भन्दा देशका अन्य क्षेत्रमा शहर निर्माण तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
यस उपत्यकाको पुरानो र प्राचिन सभ्यताको संरक्षण, संवर्दन र विकास हुनु आवश्यक छ। सम्पदा सँग सँगै सम्पदा बस्ती पनि संरक्षित हुनुपर्छ। इन्डिजिनस ज्ञानको प्रयोग हुनुपर्छ।
यस दिन २४ घण्टाका लागि अन्य कुनै पोष्ट सामाजिक संजालमा नहालौँ। #SaveNepaValleyभन्ने ह्यासट्याग राखेर केवल त्यही फोटो मात्र पोष्ट गरौँ। यही हाम्रो हड्ताल सम्बन्धित पोष्ट र यही तस्वीर मात्र त्यो दिनमा त्यही ह्यासट्याग राखेर पोष्ट गरौँ। यो सँग सँगै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुखहरूलाई सभ्य भाषामा आफ्नो माग बारे ईमेल पठाऔँ। वहाँहरूको ईमेल आइडी: ykp.kvda@gmail.com
source - Nareshbir Shakya
NEPAL SAMBAT , NEPALESE NATIONAL ERA Nepal sambat was founded on October 20, 879 A.D. during th reign of Thakuri King Raghavadeva (ca....
स्वनिगलय् स्याटेलाईट सिटि छगू आपराधिक योजना
सोनिगलय स्याटेलाइट सिटी छगू आपराधिक योजना सर्वसाधारण जनताया छेँ बुं थायबाय लाकाकया अमिगु थासं पितिना मोटर वनीगु ततब्यागु लं दयेका काठमाडौ...
काठमाडौँ उपत्यकावासीले इन्टरनेट हडताल गर्ने इतिहासमा पहिलो पटक, नेपालमा इन्टरनेट हड्ताल हुँदैछ। विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा यो सामान्य भए ...
सुभाय पोष्ट डट कम पिहां वइगु सुभाय मिडियाया सुभाय पोष्ट डट काम ऑनलाइन संस्करण पिहांवइगु जूगु दु . बरिष्ठ पत्रकार बिजयकृष्ण श्रेष्ठया सम...
Subhay Post Online
सुभाय् मिडियाको निम्ति प्रकाशक कार्यकारी सम्पादक महर्जन रत्न , सम्पादक - बिजय कृष्ण श्रेष्ठ् सुभाय् मिडिया ताम्सिपाखा , यं काठमाडौं नेपाल् ईमेल -subhaypost@gmail.com फोन - ४२१५६४४ यस सुभाय् पोष्ट डाइजेष्ट अन्लाईन ब्लग समाचार बिचार र लेखको संगालो हो संग्रह हो । यसमा प्रकाशित समाचार बिबिध लेख र बिचारहरु यस ब्लगको आफ्नै मौलिक रहनेछन् भने बिभिन्न अनलाईन मिडिया तथा पत्रपत्रीका र अन्यत्रबाट साभार गरिएका पनि छन् । पाठकबर्गको रुची र समय सापेक्ष लेखहरुलाई प्राथमिकता दिइ प्रकाशन गर्दै जाने योजना रहेको छ । subhaypost.com , subhay post online website is under construction .(sorry for inconvenience )
सुभाय पोष्ट डट कम पिहां वइगु सुभाय मिडियाया सुभाय...
subhaypostweekly.blogspot.com मचालीगु सुचं थ्व ब...
सत्यमोहन जोशीया सत्यमोहन जोशीया बायोग्राफी
नेवा: सुचना केन्द्रया न्हापांगु सुचं
Chinese Army has carried outamilitary exercise o...
Women's 3m springboard results of FINA Diving Worl...
Annual Wiener Dog Race held in Vancouver, Canada ...
People enjoy bull fights during Torch Festival in ...
चीनं तिब्बतय युद्ध अभ्यास यात
पोखराय् क्वाति नख: हनीगु
झापाय् क्वाति पुन्ही व लाखय् जात्रा
मिस नेवा: कोशी ११३७
भारत-चीन लडाईँ जूसा गुलि ख़तरनाक जुइ ?ये एक्सटर्नल...
जिगु स्वनिग:या दुघा:
मिसेस नेवा: २०१७ या फाइनल कन्हय
मिसेस नेवा: रेजिना
संकिपा दबूया सर्ट फिल्म फेस्टिबल अले सर्ट फिल्म क...
आर्ट हिस्टोरियन दिना बाङ्देलको निधन्
गुंला पर्वको विचित्रको इतिहास, बुद्धसँगको सम्बन्ध ...
मेरो माटो लोकार्पण समारोह
मेरो माटो लोकार्पण
गुंलाय असं या गुंला बाजं
भोतय नं नेवा: भासं स्कूले ब्वंकीगु
नेपाल भाषाका महाकवि सिद्दिदास माहजुको १सय ५० औं जन...